स्विस बैंक : शंकास्पद धनको नेपाल ‘कनेक्सन’ - EKalopati
काठमाडौं, माघ । जुन देशमा कृषिलाई प्राथमिकता दिइन्छ त्यो देशमा आर्थिक लगायत संपूर्ण पक्षमा उन्नति हुन्छ । कृषिमा सवलता नआइकन अरु पक्षको विकासले मात्र उन्नति संभव छैन । औद्योगिक देशहरुको सवाल अर्कै कुरा हो । जापान, रुस, बेलायत, अमेरिका, दक्षिण कोरिया, ताइवान, मलेसिया, फ्रान्स, जर्मनी, इजिप्टजस्ता मुलुकहरु उद्योगधन्दामा अग्रणी छन् । विभिन्न खालका उद्योगहरुको स्थापना, विस्तार र उन्नतिले ती देशले ठूलै फड्को मारेको छ । कल कारखाना, विद्युत्तीय सामग्री, औजार, मेशीनरी, गाडी, हवाइजहाज, पाटपूर्जा आदिको उत्पादनले आर्थिकरूपमा सम्पन्न र संवृद्ध बनेका छन् । उनीहरुले कृषिमा भर पर्नै पर्दैन । ती देशहरुको विकास चरम सीमामा पुगेको छ । उनीहरुको साख घट्दो हैन, बढ्दो छ । दोस्रो विश्व युद्धमा धराशयी भएको जापानले दुई दशकको अवधिमा चमत्कारपूर्ण काम ग¥यो । संसारलाई आफ्नो अभूतपूर्व सफलता देखाइदियो । फ्रान्स, अमेरिका को त कुरा नै नगरौं । पछिल्ला दिनहरुमा दक्षिण कोरियाले पनि औद्योगिक क्रान्ति ल्यायो । चीन, मलेशिया, ताइवान आदि देशहरुले विद्युतीय सामग्री उत्पादन गरेर अर्को चमत्कारिक काम गरेका छन् ।
सबै देशमा औद्योगिक उन्नति हुनै पर्छ भन्ने छैन । भारत, बंगालादेश, नेपाल, इन्डोनेशिया, नर्वे, पोल्याण्ड, वर्मा आदि देशहरु कृषिमा आधारित छन् । आफूलाई चाहिने परिमाण राखेर उनीहरुले अन्य देशहरुमा खाद्यान्न निर्यात गर्छन् । भारतले कृषिमा धेरै मुलुकलाई उछिनीसकेको छ । बंगाला देश पनि सवल बन्दै गएको छ । नेपालको भूभाग र यहाँको जनसंख्या हेर्ने हो भने अन्य देशको तुलनामा यसलाई कमजोर भन्न मिल्दैन । हिमाली क्षेत्रदेखि पहाड हुँदै तराइका सम्म मैदानसम्म पुग्दा प्रशस्त ठाउँहरुमा विभिन्न खालका खाद्य उत्पादन गर्न सकिने संभावनाहरु छन् । हामीकहाँ धान, मकै, कोदो, आलु, फापर, गहुँ, तोरी उत्पादन हुन्छन् । हिजोका दिनमा आफूलाई चाहिने अन्न मात्र उत्पादन गर्दै आएको देशले अहिले केही मात्रामा भए पनि विदेश निर्यात गर्न सक्ने भएको छ । कृषि उत्पादनका कुरा गर्दा खाद्यान्न बाहेक पशुपालन, माछा पालन, चिया, कफी, कुखुरा पालन, पशु पालन, वन पैदावर, तरकारी आदि थुप्रै पक्ष समेटिन्छन् ।
पशुपालनमा नेपाल अव्वल ठहरिएको छ । उन्नत गाई–भैंसी पालेर प्रशस्त मात्रामा दूधको उत्पादन गरिएको छ । सरकार मातहतको दुग्ध विकास संस्थानदेखि अन्य निजी क्षेत्रमा स्थापना भएका हजारौं दुध चिस्यान केन्द्रले काम पाइरहेका छन् । हिजोका दिनमा एक माना दुध दिने भैंसी वा गाई पालेर आफूलाई मात्र पनि खान नपुग्ने थियो । अहिले उन्नत जातका पशुपालनबाट किसानहरुले निकै आर्थिक विकास गरेका छन् । गाई–भैंसी पालनमा व्यावसायिकता आएको छ । विदेशको आकर्षक जागीर छाडेर नेपालमै भैंसी पालन वा गाईपालनमा लाग्ने हजारौं किसानले मनग्य धन आर्जन गरेका छन् । एउटै किसानले ५०–६० र १०० सम्मको हाराहारीमा भैंसी पालन वा गाई पालन गरेर वार्षिक लाखौंंको आम्दानी गरेका छन् । त्यत्ति मात्र नभएर लाखौं वेरोजगारहरुलाई रोजगारीको अवसर जुटाएका छन् । माछा पालनमा पनि धेरै उन्नति देखिएको छ । अझ त्यसमाथि ट्राउट माछा खेतीबाट अन्य माछा पालन व्यवसाय भन्दा तेब्बर आम्दानी गर्न किसान सफल देखिएका छन् । त्यसैगरी कुखुरा पालन, बंगुर पालन, बाख्रा पालन आदिबाट पशस्त आम्दानी भएको छ । चिया खेतीमा पनि विकास भएकै छ । कफी खेती हलक्क बढ्दो छ । तरकारी सवैभन्दा अव्वल आम्दानीको स्रोत भएको छ । लाखौं वेरोजगार युवाहरुको संलग्नता यसैमा देखिएको छ । एक रोपनी जमिन हुने हो भने सानो परिवार राम्रैसँग पालिएको छ तरकारी व्यवसायबाट । अझ अहिले त तरकारीमा आएको व्यावसायिकताले निकै राम्रो आम्दानीको बाटो बनेको छ ।
यहाँनेर एउटा जिज्ञासा उब्जिन्छ, त्यसो भए नेपालमा कृषि क्रान्ति भएकै छ त ! के कुरामा कमी आयो र ? तर खेतीपाती गरियो भन्दैमा त्यसमा आधुनिकता र वैज्ञानिक प्रविधि अपनाइएन भने उत्पादन राम्रो हुन सक्दैन । त्यसैगरी आधुनिक औजार, उन्नत मल बीउ–विजन आदि पनि उत्पादन वृद्धि गर्नका लागि अपरिहार्य कुरा हुन् । कृषिमा उन्नति गर्ने विज्ञहरु नेपालमा नभएका होइनन् । तर ती आफ्नो पेशाप्रति इमानदार देखिएका छैनन् । सरकारी कर्मचारीले आफ्नो दायित्व निर्वाह गरेका छैनन् । कुर्सीमा बसेर जागीर पकाउनु बाहेक कृषिमा कसरी क्रान्ति ल्याउने भन्नेमा सोच विचार गर्दैनन् उनीहरु । दिन कसरी कटाउने र पेन्सन कसरी पकाउने भन्ने ध्याउन्न बाहेक अरु केही अतिरिक्त विचार उनीहरुमा आएजस्तो लाग्दैन । होलान् दुई चार जना इमानदार कर्मचारी पनि । तर तिनले मात्र के गरुन् ? सरकार चलाउने उच्च ओहादाका ओहोदाधारीमा नै उन्नत सोच विचार पाइँदैन । यो देशको सरकारले कृषिमा क्रान्ति ल्याउन गतिलो नीति कहिल्यै ल्याएन । उही पुरानो ढर्रा र ढस्सामा दिन बिताउँदै छ । यसरी कसरी देशमा कृषि क्रान्ति आउँछ ?
अब बन्ने सरकारले गंभीरतापूर्वक सोच्नु पर्ने बेला आएको छ । जबसम्म नेपालको कृषि क्षेत्रमा आधुनिकता आउँदैन, क्रान्ति ल्याइन्न, नीति नियम बनाउने योजनाकारहरुमा गतिलो बुद्धि पलाउँदैन, विज्ञहरुले इमानदारीपूर्वक काम गर्दैनन्, कर्मचारीहरु घाम तापेर मात्र दिन नकटाइ आफ्नो कृषि कर्ममा लाग्दैनन्, किसानहरुलाई राम्रो प्रशिक्षण, मल, बिउ–विजन, औजारमा सहुलियत प्रदान गरिदैन तबसम्म कृषिमा आमुल परिवर्तन आउँदैन, मुलुक अघि बढ्न सक्दैन । कृषिमा विकास गर्ने संभावनाहरु थुप्रै छन् । आफूलाई राखेर आधा उत्पादन निर्यात गर्न सकिने संभावनाहरु पनि धेरै छन् । तर त्यसका लागि नीति निर्माण गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता आवश्यक पर्छ । विज्ञ, इमानदारी कर्मचारीहरु दत्तचित्त भएर लागी पर्नुपर्छ । किसानहरुले अन्य क्षेत्रभन्दा कृषि कर्मलाई नै सर्वोपरि ठानेर समर्पित भए भने कृषि क्रान्ति आउन धेरै वर्ष कुर्नु पर्दैन यो देशमा । यसो भएको खण्डमा मुलुक अघि बढ्ने कुरामा कुनै द्विविधा रहने छैन ।
बेलायतमा बसोबास गर्ने नेपाल आउजाउ गरिरहने मिनुले भारतीय नागरिक सिर्वतेरा प्रकाश ९एसपी० छिब्बरसँग विवाह गरेकी छिन् । कागजातहरूले एसपी छिब्बरको सन् २००३ मा मृत्यु भएको देखाउँछन् । भारतीय अदालतमा परेको एउटा मुद्दा केलाउँदै जाँदा भेटिएका केही कागजातबाट एसपी छिब्बरकी जेठी श्रीमती पनि छन् भन्ने देखिन्छ । मिनुतर्फ दुुई छोरा पर्वेश छिब्बर र महेश छिब्बर छन् ।
मिनु र उनका दुवै छोराको नेपाली राहदानी छ । सन् २००६र०७ मा ७८ लाख ५० हजार ९९१ का दरले दुुई छोरा र मिनुले २ करोड ३५ लाख ५२ हजार ९७३ अमेरिकी डलर ९२ अर्ब ६१ करोड ४३ लाख ८० हजार रुपैयाँ० स्विस बैंकमा जम्मा गरेका छन् । जेठो छोरा पर्वेशको भारतमा आडवानी होटल एन्ड रिसोर्ट र बेलायतमा आधा दर्जन कम्पनीहरूमा पनि लगानी छ । लन्डनको बर्लिङटन आर्केडमा बस्दै आएका कान्छो छोरा महेशको पनि लन्डनमै चार वटा कम्पनीमा लगानी रहेको देखिन्छ ।
मिनु शाह छिब्बरका बारेमा बुझ्न हामीले परराष्ट्र मन्त्रालयमा सम्पर्क ग¥यौं । मन्त्रालयको राहदानी विभागको प्रशासन शाखाका शाखा अधिकृत गणेशप्रसाद अधिकारीले दिएको जानकारी अनुसार, मिनु छिब्बरका नाममा बेलायतस्थित नेपाली दूतावासबाट १७ सेप्टेम्बर २०१३ मा ०६७०२५३६ नम्बरको मेसिन रिडेबल पासपोर्ट ९एमआरपी० जारी भएको छ । पासपोर्टमा लेखिए अनुसार, उनको स्थायी ठेगाना ललितपुर बागडोल हो । पासपोर्टमा नजिकको नातेदारमा भतिजा अमोदप्रताप राणाको नाम उल्लेख छ ।
दुबईको पर्ल ग्लोबलसँग सम्बन्धित एटवाटर पनि स्विस बैंकका बचतकर्ता हुन् । उनले दुुई फरक–फरक खातामा रकम जम्मा गरेका छन् । एउटा खातामा ९ लाख ७ हजार ७७ अमेरिकी डलर ९९ करोड ६३ लाख रुपैयाँ० रकम जम्मा देखिन्छ । अर्को खातामा भने ५ करोड ६५ लाख १६ हजार ९७९ डलर अर्थात् करीब ९ अर्ब रुपैयाँ रकम देखिन्छ । अहिले उनी बेलायतमा बस्दै आएका छन् । स्विस बैंकको विवरण अनुसार, बेलायतमा एटवाटरको पाँच वटा कम्पनीमा लगानी देखिन्छ ।
कतिपय विदेशी नागरिकले नेपाली कागजात प्रयोग गरेर स्विस बंैकमा सम्पत्ति राखेको पनि फेला परेको छ । आईसीआईजेले उपलब्ध गराएको विवरण अनुसार, ५३ वर्षीय इजरायली नागरिक लिवर जोहार येहुदाले नेपाली पासपोर्ट प्रयोग गरेर स्विस बैंकमा पैसा जम्मा गरेका छन् । येहुदाले पाटन, काठमाडौं ठेगाना उल्लेख गरी स्विस बैंकमा रकम जम्मा गरेका हुन् । केमिकल ९रसायन० को आयात निर्यातका व्यापारी भनिने येहुदाको नाममा ४ लाख ९७ हजार २४६ अमेरिकी डलर ९५ करोड ३५ लाख ७३ हजार २८४ रुपैयाँ० जम्मा देखिन्छ ।
नेपाली ठाउँसँग मिल्ने ठेगाना उल्लेख गरी थप तीन जना विदेशीले पनि स्विस बैंकमा रकम जम्मा गरेका छन् । आईसीआईजेको सन् २००६र०७ को विवरण अनुसार, युएई ठेगाना भएका भारतीय नागरिक सुजलप्रकाश साहले ३ लाख ३२ हजार ७४० डलर ९३ करोड ५८ लाख ४९ हजार ४०७ रुपैयाँ० जम्मा गरेका छन् ।
भारतका अरुणकुमार रामनिकलाल मेहताले ४ करोड ४ लाख अमेरिकी डलर ९४ अर्ब ८४ करोड ४४ लाख १५ हजार ९७३ रुपैयाँ० जम्मा गरेका छन् । स्विस बैंकमा रकम जम्मा गर्ने खातावालाको ‘व्यक्तिगत विवरण’ सम्बन्धी दस्तावेजमा मेहताको ठेगाना ‘पाटन’, व्यवसाय मुम्बईको हीरा कम्पनीको डाइरेक्टर उल्लेख छ । नेपालमा नाम नसुनिएका मेहता को हुन् भनेर पत्ता लगाउन थप अनुसन्धान ग¥यौं । यसमा खोपकेले प्राप्त गरेको दस्तावेजमा उनको व्यक्तिगत ‘प्रोफाइल’ सँग सम्बन्धित सूचीमा भेटिएका अन्य सात जनाको नाम र विवरणहरूका बारेमा डिजिटल अनुसन्धान ग¥यो । त्यसबाट अरुणकुमार भारतीय नागरिक भएको र ती सातै जना उनको परिवारको सदस्य रहेको पुष्टि भयो । दस्तावेजमा उल्लेख भएको उनको ठेगाना पाटन भन्ने ठाउँ भारतको गुजरात राज्यमा पर्दछ जहाँ मेहता जन्मेका थिए ।
अदालतले ह्वाइट सेडार इन्भेष्टमेन्ट लिमिटेड नामको ट्रष्टसँग आवद्ध कुन व्यक्तिले ४४ मिलियन डलर स्विस बैंकमा जम्मा गरेका हुन् भन्ने पत्ता लगाउन नसकेपछि २०१६ अप्रिलमा सो मुद्दा खारेज गरेको थियो । बम्बई उच्च अदालतले भनेको छ, “एचएसबीसी ९स्विस बैंक० जेनेभाले उक्त ट्रष्टसँग सम्बन्धित खाताको विवरण उपलब्ध गराएको खण्डमा मात्र रकम जम्मा गर्ने स्रोतको बारेमा खुल्न सक्छ ।” खोपकेलाई आईसीआईजेबाट प्राप्त मेहताको व्यक्तिगत विवरणमा ग्राहकको प्रोफाइलसँग सम्बन्धित व्यक्तिको सूचीमा ह्वाइट सेडार इन्भेष्टमेन्ट लिमिटेड पनि छ । उसको नाममा ४ करोड ४८ लाख ६१ हजार १७१ अमेरिकी डलर स्विस बैंकमा जम्मा भएको भेटिएको छ ।
त्यस्तै गोविन्दभाई लालझिभाई ककडिया नाम गरेको व्यक्तिले स्विस बैंकमा २ हजार १८६ अमेरिकी डलर ९२ लाख ३५ हजार ५१९० रुपैयाँ जम्मा गरेका छन् । सुजल, अरुण र गोविन्द तीनै जनाको ठेगाना पाटन, काठमाडांै लेखिएको छ । यही ठेगानाका भरमा स्विस बैंक र आईसीआईजेले उनीहरूले राखेको पैसालाई ‘नेपालीले गरेको बचत’ को सूचीमा राखेको देखिन्छ ।
भारतको दैनिक पत्रिका इन्डियन एक्सप्रेस ले २०१५ को फेब्रुअरी महीनामा प्रकाशन गरेको एउटा समाचारमा ककडिया सामेल भएको शीतल ग्रुपले सन् २००६र०७ मा ९ हजार १०० अमेरिकी डलर स्विस बैंकमा राखेको खुलासा गरेको थियो । सो खातामा भएको रकमको लाभग्राही ‘बेनिफिसियल ओनर’ मा ककडिया र उनका तीन भाइको नाम छ । तर आईसीआईजेले नेपालअन्तर्गत उपलब्ध गराएको दस्तावेज अनुसार, उनको नाममा २००६र०७ मा २ हजार १८६ अमेरिकी डलर स्विस बैंकमा जम्मा भएको देखिन्छ ।
के हो स्विस बैंक रु
स्विट्जरल्यान्डमा सन् १८५४ मा ‘स्विस बैंक कर्पोरेशन’ का रूपमा स्थापित स्विस बैंकका शाखा ५० देशमा छन् । स्विस बैंकले आफ्नो बारेमा ‘उच्चस्तरको गोपनीयता र कम स्तरको वित्तीय जोखिमको व्यवस्था गरेको’ दाबी गरेको छ । आयस्रोत नखोजिने र लगानीकर्ताको विवरण सार्वजनिक नगर्ने भएकाले गैरकानूनी आर्जन यस बैंकमा जम्मा गर्न सहज मानिन्छ । स्विट्जरल्याण्डको अनलाइन पत्रिका स्विस इन्फो न्यूज डट सिएच का अनुसार, ‘खासगरी सम्बन्धविच्छेद ९डिभोर्स०, गम्भीर आपराधिक कार्य, बैंक टाट पल्टिंदा, अंशबन्डा गर्दा प्राप्त रकम यो बैंकमा मौज्दात गर्नु सुरक्षित मानिन्छ ।’
बंैकका अनुसार, विश्वका २०० भन्दा बढी देशका नागरिकको मौज्दात छ । बैंकले जुन कुनै प्रयोजनका लागि कुनै पनि निकायलाई खातावालको विवरण दिंदैन । तर, सन् २०१५ मा स्विस सरकार र युरेपियन युनियन ९इयु० बीच भएको सम्झौता अनुसार ‘असाधारण गोपनीयता अन्त्य गरी स्विट्जरल्यान्ड र अन्य युरोपियन मुलुकका खातावालहरूको विवरण माग भएमा आदानरप्रदान गर्नुपर्ने’ सम्झौता छ । सन् २०१५ मा आईसीआईजेले गरेको ‘स्विस लिक्स’ ले कर छली तथा आपराधिक क्रियाकलापबाट आर्जन गरिएको रकम समेत स्विस बैंकमा जम्मा गरेको तथ्य सार्वजनिक भएपछि ईयूले बैंकसँग यस्तो सम्झौता गरेको हो । तर यो सम्झौताले पनि स्विट्जरल्याण्ड र युरोपियन मुलुकसँग असम्बन्धित कारोबार र तीभन्दा बाहिरका मुलुकहरूको गैरकानूनी आर्जन त्यहाँ लुकाउन सकिने नै देखिन्छ ।
स्विस बैंकले ‘तानाशाह, भ्रष्ट नेता, कर छली गर्ने व्यापारी, हतियार तथा लागूऔषध कारोबारीको रकम जम्मा गरी नाफा कमाउने काम गरेको’ आईसीआईजेको दाबी छ । ‘स्विस लिक्स’ पछि स्विस बैंकले विश्वभर आलोचना खेप्नुप¥यो । केही मुलुकका नेताहरूको राजनीति नै धरापमा प¥यो । त्यसको प्रभावस्वरुप स्विस बैंकलाई पनि नियमनको दायरामा ल्याउने प्रयास ईयूले ग¥यो । तर, अझै पनि स्विस बैंक खातावालाको विवरण आदानरप्रदान गर्न चाहँदैन । स्विस बैंकर्स एशोसिएशनले तयार पारेको २०१५ को प्रतिवेदन अनुसार, यस बैंकको ६।५ ट्रिलियन डलर ९६५ खर्ब अमेरिकी डलर० सम्पत्ति छ । प्रतिवेदन अनुसार, यसमध्ये ५१ प्रतिशत सम्पत्ति स्विट्जरल्यान्ड भन्दा बाहिरका देशहरूबाट लगेको हो ।
९‘स्विस लिक्स’ इन्टरनेशनल कन्सोर्टियम अफ इन्भेष्टिगेटिभ जर्नालिष्ट ९आईसीआईजे० र ले मन्डद्वारा सन् २०१५ मा एचएसबीसी प्राइभेट बैंक ९स्विट्जरल्याण्ड० का दस्तावेजहरूमाथि गरिएको अनुसन्धानमा आधारित छ । आईसीआईजेले स्विस लिक्स प्रोजेक्टअन्तर्गत करीब ६० हजार दस्तावेजको विस्तृत अध्ययन गरेपछि एचएसबीसी बैंकका झन्डै एक लाख खाता र खातावालाहरूको विवरण फेला पारेको थियो । तीमध्ये धेरैजसो ग्राहक र खाताहरू सम्बन्धी डाटा सन् १९८९ देखि २००७ सम्मका थिए ।
Previous articleकृषि मन्त्रीले सचिव कुट्ने खाजेपछि सचिव भागे
Next articleपटक पटक देखि स्वाईनफ्लु कहिलेदेखि देखियो ?